တာဝန်သိလောင်းကစား - Goldmancasino
GoldManCasino.com သည်၎င်း၏ကစားသမားများကိုတာ ၀ န်ယူသည့်ဂိမ်းအွန်လိုင်းတည်ထောင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရာတွင်ပျော်စရာဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုပေးအပ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။
သင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်လောင်းကစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များကို ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများနှင့်နိုင်ငံတွင်းနှင့်ဒေသဆိုင်ရာလောင်းကစားဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့များအတွက်ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်များကိုလည်းသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
သင်သည် GoldManCasino.com တွင်သင်၏ဂိမ်းအလေ့အထများကိုစိတ်ပူမိလျှင်သို့မဟုတ်ခေတ္တရပ်နားရန်အချိန်တန်သည်ဟုထင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ customersupport@instantgamesupport.com ရေတိုသို့မဟုတ်ရေရှည်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ထားသည့်ကာလကိုထုတ်ပေးရန်။
GoldManCasino.com တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပေးထားသောဂိမ်းများသည်အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေမှုပုံစံတစ်ခုသာဖြစ်ရန်ရည်ရွယ်ထားကြောင်းမှတ်မိရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အချို့သောကစားသမားများသည်ဤဂိမ်းအမျိုးအစားများကိုစွဲလမ်းရန်စိတ်သဘောထားရှိနိုင်ကြပြီးအချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှသိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုများစုဆောင်းမိနိုင်သည်။
အွန်လိုင်းဂိမ်းများသည်အခွင့်အရေးပေါ်အခြေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သင့်အားအနိုင်ရရှိမည်ဟုကတိပေးမည့်အာမခံထားသည့်နည်းဗျူဟာများသို့မဟုတ်နည်းလမ်းများမရှိပါ။
သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကို 'လိုက်ဖမ်း' ရန်ကြိုးစားခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုယခင်ကပြန်လည်ရယူရန်မျှော်လင့်ချက်၌ငွေများများထည့်ခြင်းဖြင့်သင်နောက်ထပ်ရန်ပုံငွေများဆုံးရှုံးနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏အွန်လိုင်းဂိမ်းသည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝနှင့်အခြားသူများအပေါ်ထားရှိရမည့်တာဝန်ဝတ္တရားများပျက်ပြားသွားလျှင်လောင်းကစားနှင့် ပတ်သက်၍ ပြaနာရှိနိုင်သည်။ သင်၏လောင်းကစားခြင်းလုပ်ငန်းများကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ပြီးဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားပါ။
GoldManCasino.com သည်သင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါနေ့စဉ်၊ အပတ်စဉ်နှင့်လစဉ်ကန့်သတ်ပမာဏကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။ ငွေပမာဏတွင်သင်စုဆောင်းရန်ဆန္ဒရှိသောသိုက်များ၊ လုပ်ခများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများပါ ၀ င်သည်။ သင်ကန့်သတ်ချက်များကိုနောက်မှလုပ်လိုသောပြောင်းလဲမှုသည်သင်တောင်းဆိုပြီး ၇ ရက်အလိုတွင်စတင်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်သင်မည်မျှကြာကြာကစားသည်ကိုအချိန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။ သင်၏ကန့်သတ်ချက်များကိုပြောင်းလဲရန်သင်သည် "အကောင့်" သို့သွားနိုင်သည်။
သင်၏အချိန်ကုန်ကိုသင်၏တာဝန်ရှိဂိမ်းကစားခြင်းချိန်ညှိချက်များတွင် ၄၂ ရက်အထိသတ်မှတ်နိုင်သည်။ (သို့) သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုအီးမေးလ်မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူထံသို့ပေးပို့နိုင်သည် (customersupport@instantgamesupport.com).
You may exclude Yourself from the use of the Services for any definite or indefinite time (or, if Your Account is regulated by the Company's Gambling Commission online gambling licence - foraminimum period of between six months to 12 months (extendable by You for one or more periods of at least six months each)) via the responsible gaming section in the client interface or by contacting our customer support via (customersupport@instantgamesupport.com), သင်၏ကုမ္ပဏီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အညီ။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းတောင်းဆိုချက်ကိုအတည်မပြုမီသင့်ကိုသင်ဖယ်ထုတ်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ သင်ကကိုယ့်ကိုကိုယ်ဖယ်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လျှင်သင့်အားသင်ကိုယ်တိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းအားလက်ရှိသင်အသုံးပြုသောဝေးလံသောလောင်းကစားဝိုင်းအော်ပရေတာများသို့တိုးချဲ့ရန်စဉ်းစားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းသည်။ သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်မဆုံးဖြတ်ရသေးသောအလောင်းအစားများကိုသာမန်အချိန်အတိုင်းအတာများနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်သက်ဆိုင်ပါကသင့်အားပေးချေသောငွေပမာဏများအရပုံမှန်နည်းလမ်းအတိုင်းဖြေရှင်းမည်။ မိမိကိုယ်ကိုဖယ်ထုတ်ထားသည့်အကောင့်လုပ်ကွက်များကိုသဘောတူထားသည့်ကိုယ်ပိုင်ဖယ်ထုတ်ခြင်းကာလအတွင်းဖျက်သိမ်း။ မရပါ။
အကြံပေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ http://www.counselling-directory.org.uk/gambling.html
Cumbria အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအကြံပေးလုပ်ငန်း (CADAS) http://cadas.co.uk/
စွဲလမ်းမှုအပေါ်အရှေ့မြောက်ကောင်စီ (NECA) http://neca.co.uk
ရွေးစရာများ - ဆောက်သမ်တန် ဝက်ဘ် http://www.optionscounselling.co.uk/
RCA ယုံကြည်မှု အီးမေး http://www.rcatrust.org.uk
အင်တာနက်စစ်ထုတ်ခြင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်)
ဂိမ်းဆိုဒ်များကို ၀ င်ရောက်ခြင်းကိုတားဆီးရန်အရေးကြီးသောကိရိယာမှာအင်တာနက်စစ်ထုတ်ခြင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ဖြစ်သည်။ သင်၏အိမ်ရှိအသုံးပြုသူများအားဂိမ်းကစားခြင်းကိုတားမြစ်လိုပါကအောက်ဖော်ပြပါပရိုဂရမ်များထဲမှတစ်ခုကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်အွန်လိုင်းလောင်းကစားခြင်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများတွင် PICS နှင့် ICRA တံဆိပ်များကိုပြသသည်။ အင်တာနက်စစ်ထုတ်စက်များသည်ဤတံဆိပ်များပေါ်တွင်ကောက်ယူပြီးသင်၏ကွန်ရက်ရှိအသုံးပြုသူများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းကိုထိရောက်စွာတားဆီးနိုင်သည်။ Microsoft ၏အင်တာနက်အကြောင်းအရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်သည်ဤတံဆိပ်များကိုဖတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ကျေးဇူးပြု။ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ https://www.fosi.org/icra.
ပိုက်ကွန်ထိန်း - https://www.netnanny.com
အသက်မပြည့်သေးသောလောင်းကစားခြင်းကိုလုံးဝတားမြစ်သည်။ သင်နေထိုင်သောနိုင်ငံ၏ဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်းအသက် ၁၈ နှစ် (သို့) အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကစားသမားများအားလုံးသည်အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုရှိစေရန်သင့်တော်သောအသက်စစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်သည်။ အကယ်၍ ကစားသမား၏သက်တမ်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ သင်တရားဝင်အသက်အရွယ်ရှိကြောင်းအတည်ပြုရန်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များတောင်းခံပါလိမ့်မည်။ စိတ်ကျေနပ်လောက်သောသက်တမ်းအထောက်အထားများကိုအတည်ပြုပြီးသည်အထိငွေစာရင်းများကိုဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။
မိဘထိန်းချုပ်မှုများသည်သင်၏ကလေးကိုအွန်လိုင်းလုံခြုံရေးအတွက်အရေးကြီးသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ မိဘထိန်းချုပ်မှုများကိုကွန်ပျူတာများ၊ စမတ်ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များနှင့်ဂိမ်းကစားခြင်းစနစ်များအပါအ ၀ င်အင်တာနက်ဖွင့်နိုင်သောကိရိယာများစွာတွင်ရရှိနိုင်သည်။ မိဘထိန်းချုပ်မှုများသည်သင်၏ကလေးအွန်လိုင်းပေါ်ရှိသည့်အခါမသင့်လျော်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
Net Nanny - မိဘများဆီသို့အဓိကအားဖြင့်ရောင်းချသောအကြောင်းအရာ - ထိန်းချုပ်သည့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည် ၄ င်းတို့ကလေး၏ကွန်ပျူတာလှုပ်ရှားမှုကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုကြည့်ပါ: www.netnanny.com